Mpanamboatra sy mpamatsy famantaranandro mahery i China | EMATE
Famantaranandro Smart Alarm
Volavola marani-tsaina, mora tanterahina. Mampiseho mazava ny ora, volana, daty ary maripana ankehitriny. Misy ihany koa ny fanairana miaraka amina snooze. Ity Clock ity dia mitaky bateria 2 "AAA" hiasa, azonao atao ny manapa-kevitra ny hivarotra azy amin'ny alàlan'ny bateria na tsia.
· Fotoana izao ao anatin'ny 12 / 24ora
· Volana kalandrie, daty
· Fampisehoana ny mari-pana anatiny in / ℉
· Fanairana amin'ny fiasana snooze
· Refy: 81 * 37 * 72mm
· Halavan'ny maripana: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉)
· Fanjifana herinaratra: bateria 2 * AAA
· Fametrahana: mitsangana ambony latabatra
Miaraka amin'ny ekipa R&D matanjaka sy rojom-panolanana mifangaro eo an-tampony, i Emate no mpamatsy anao azo antoka manome serivisy OEM / ODM mijanona iray, izay manatitra entana amin'ny kalitao tsara sy amin'ny fomba mahomby.
FAQ an'ny mpanjifa
1.Q: Inona ny vidinao?
A: Miovaova ny vidiny isaky ny fangatahana amin'ny antsipiriany sy ny anton-javatra eo amin'ny tsena. Handefa anao ny takelaka fanolorana nohavaozina aorian'ny nifandraisan'ny orinasanao anay raha mila fanazavana fanampiny.
2.Q: Manana habetsahan'ny kaomandy farafahakeliny ve ianao?
A: Eny, ny kaomandy fividiananay kely indrindra dia 1000-2000pcs mahafeno ny fepetra takian'ny MOA: $ 15000.
3.Q: Afaka manome antontan-taratasy mifandraika amin'izany ve ianao?
A: Eny, ny fitaovana dia manaraka tanteraka ny fenitra CE, RoHS ary FCC. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
4.Q: Inona ny salan'isa firy?
A: santionany fitarihana fotoana: 3-5 andro fiasana.
Fotoam-pamokarana masinina: 55 andro aorian'ny nahazoana tapakila.
5.Q: Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?
A: petra-bola 30% mialoha sy fifandanjana 70% amin'ny kopia BL.
6.Q: Manolotra serivisy marika manokana tsy miankina ve ianao?
A: Eny, azonao atao ny manamboatra ny sary famantaranao amin'ny vokatra sy amin'ny fonosana.
Big Digit Digital Desk Clock Miaraka amin'ny Timer Fihaonana
Large Screen Rc Clock Miaraka amin'ny Seranana famandrihana usb 2
Clock amin'ny alàlan'ny rindrina Jumbo miaraka amin'ny maripana ...
Famantaranandro amin'ny latabatra amin'ny rindrina feno amin'ny tempearture ...
Clock Radio Digital niampy hazavana ambadika maro ...
Fandefasana onjam-peo lehibe miaraka amin'ny mari-pana sy ...
Emate dia hanatrika ny 2021 China Cross-Border E-Commerce Trade Fair amin'ny 15-17 aogositra 2021